पुन:११ दिन थप गरि जेठ ५ सम्म लकडाउन कायम राख्ने सरकारको निर्णय ठिक कि बेठिक ? – Namaste Dainik
May 6, 2020 May 6, 2020 NamastedainikLeaveaComment on पुन:११ दिन थप गरि जेठ ५ सम्म लकडाउन कायम राख्ने सरकारको निर्णय ठिक कि बेठिक ?
काठमाडौँ,२४ वैशाख । मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमणका घ`टना बढ्दै गएपछि सरकारले हाल कायम लकडाउनकाे अवधि लम्ब्याउने निर्णय गरेकाे छ। भाइरस न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि सरकारले जारी लकडाउन लम्ब्याएर जेठ ५ गतेसम्मका लागि कायम राख्ने निर्णय गरेकाे हाे। आज बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउनको अवधि छैटाैँपटक ११ दिन थप गरेकाे हाे । यसअघि घोषित लकडाउन २५ वैशाख(भाेलि)सकिँदै थियाे ।
मुलुकमा कोरोना संक्रमणका घ`टना बढ्दै गएपछि सरकारले पुनःलकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । पछिल्लाे समय नेपालगन्जमा समुदायस्तरमा काेराेना संक्रमण फैलिएकाे भेटिएपछि लकडाउन थप गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेकाे देखिन्छ । नत्र वैशाख २५ पछि लकडाउन खुकुलाे पार्नेबारे पनि छलफल भइरहेकाे थियाे ।
यसअघि मंगलबार को`रोना रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले पनि लकडाउन तत्काल खुकुलो पार्न नसकिने र अवधि पुनःथप्नुपर्ने निष्कर्ष सहित सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियाे । लकडाउनकाे स्वरूप फेर्नेबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच छलफल भएकाे थियाे ।
को`रोना संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन तथा सामाजिक दूरी र प्रतिबन्धात्मक कार्यक्रम नै प्रभावकारी रहेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत लकडाउन तत्काल फुकुवा गर्न नहुने सुझाव दिँदै आएको छ । हालसम्म काेराेना भाइरसकाे प्रभावकारी उपचार पत्ता लाग्न सकेकाे छैन, जसकारण यसकाे संक्रमणबाट जाेगिने उपाय नै विश्वभरि अपनाइएकाे छ ।
सरकार स्रोत होइन परिचालक हो। बढी राहत चाहिए धेरै कर तिर्नोस्:अर्थमन्त्री खतिवडा।
December 24, 2019 January 5, 2020 Namastedainik